Zuva rezhizha | Celebrate Crafts | Mapeji evaravara ehurukuro
Iyo yakagadzirirwa ejira tag
Ikoti yezhizha ndiyo inoshandiswa kwezuva rezhizha rezhizha! Zuva rezhizha motokari inzira inobva kuPalatinate uye inosanganisira dzimwe nzvimbo dziri pedyo. Nechivara chemavara chinonakidza chando chacho chinodzingwa, pakutanga iye aive netsika yekufa.
Tsika yezuva rezhizha
Zuva rezhizha tsvimbo rinomiririra hupenyu hutsva, mutsime uye saizvozvo kutanga kwemutsva mutsva. Zvichienderana nemunharaunda, zuva rezhizha rezhizha rinoitika nguva isati yasvika Easter, netsika yeSvondo yechitatu pamberi peIsita.
Tinker zuva rezhizha rinonamatira iwe pachako
Akakurumbira tsika Kurpfälzer nzira, ane chaizvo pamwe nevahedheni uye wawana uchapupu naye panguva iyo Sun King, Louis XIV. Kunyange Zvisinei kare akapa mavara zuva zhizha Isa Saka, haina kuzivikanwa. Mushure Sommertagszug yechando nokupiswa muchimiro hofori Snowman hombe hauzozvikanganwi.
Chii chiri zuva rezhizha?
Zuva rezhizha tsvimbo tsvimbo yakajeka, pano inonzi Stecken, iyo yakagadzirwa nemabhuru machena. Pamusoro panogara mbiriso pretzel uye dzimwe nguva kunyange dhe rinoputika sechiratidzo chehupenyu hutsva uye mutsime - apa unogona kuona hukama neIsita!
Mune mamwe maguta, maapuro kana zvinyorwa zviduku ndiwo tsika pamusi wezhizha. Neine mavara echando muzhizha, vana vanoenda nemotokari dzakarongedzwa dzemakwikwi akasiyana-siyana. Pakupedzisira, zvechokwadi, zvinotapira zvinogona kudyiwa - nokuda kwemudiki kudarika, zvakakosha!
Uye pano kunouya mutungamiri akajeka pamusoro pokuti angaita sei chinyararire zuva rezhizha iro pacharo. Izvi zvinosimudzira manzwiro kunyanya kana chando pachigodhi ichi chisingadi kupa uye vana vari kutotanga kurota kwemavara emagetsi.
Chokutanga, unoda zvinhu zvinotevera: tsanga yehazelnut kana mbatya (iyo inowanikwawo muchitoro chemaruva), banga rehomwe, jira rinoputika, mbiriso pretzel (inenge yakabikwa!), uta kana kuti crepe paper.
Kutanga, iwe unorodza tsvimbo yevana, zvino unotanga kuzadza tsvimbo kubva pasi kusvikira kumusoro nemapuranga apera (kana akatengwa kana kare akaitwawo pachako). Kana ukasarudza kushandisa pepa repepipe, unogonawo kupfekedza mashizha ezuva rezhizha ane mavara akareba. Izvi zviri nyore kunyanya kuvana vaduku. Ingoisa mavara akawanda emapuranga akareba pamusoro, svora zvishoma uye uise mbiriso pretzel uye zamai pamusoro - zuva rezhizha rakagadzirira.
Kana iwe uchida, iwe unogona kuvhara tsvimbo pachayo nepepa rekugadzira, hapana mhedziso kune mafungiro ako!
Ita matanamende ekuuya iwe pachako | Mishonga yezhizha & DIY
Makuru makuru ekutenga uye kwechando tinker
Vaka dzimba dzechikara iwe pachako | Tinker nevana
Ita zvikwata zvinonhuwira nevana
Tinker nevana - zvinhu zvakasikwa
Tinker nevana - munyu mukaka
Tinker nevana - Muti weupenyu
Tinker nevana - chiratidzo chemukova
DIY school bag | zuva rokutanga rechikoro
Kuita nevana - kuita ink yakavanzika